Bitcoin kuchera kambani First dziri Tel Aviv Stock Exchange - Blockchain News
Bitcoin kuchera kambani First dziri Tel Aviv Stock Exchange
Canadian cryptocurrency kuchera zvakasimba Bitfarms apedza batanidzo dzaro Tel Aviv-dzakanyorwa kambani akatendeuka crypto mugodhi kambani Blockchain Mining Ltd., yakazivisa ari pakunamata kuti Tel Aviv Stock Exchange Sunday.
Kwemapazi kunoita boka wokutanga cryptocurrency bhizimisi paro kuti dziri exchange sezvo.
Mapoka maviri okutanga akazivisa kwemapazi ngaakuitirei-uye urongwa kunyora pamusoro Tel Aviv Stock Exchange somunhu crypto-akaisa boka-muna December 2017, asi akatarisana kuongororwa kubva veIsrael regulator. In March, makambani akazivisa kuti veIsrael kuchengetedzeka Authority apedza kuongorora mariri batanidzo.
Bitfarms unoshanda zvivako mana muQuebec mudunhu uye pari kuvaka cheshanu kadambari centre.
Nokuda launc ...
Smart zvibvumirano zvino kuzivikanwa pasi Tennessee mutemo
Previous Post:Coinsource ari deploying Bitcoin ATMs
Next Post:Mastercard anoshandisa blockchain kurwa nyepera IDs